Etsy kely ange | 102 KARA
Etsy kely ange
Fotoana maro no efa niarahantsika teto amin’ny tranon-kala 102.Kara.com. Koa rariny sy hitsiny loatra raha misaotra sy mankasitraka anareo mpanjohy sy mpanaraka izany.
Betsaka ny loha-hevitra niarahantsika teto : tao ny famakafakana sy fanadihadiana ny lafiny politika amin’ny endriny rehetra. Teo koa ny mikasika ny trangam-piaraha-monina ao anatin’ny sosialy, ary mazava ho azy ny manodidina sy ny fiatraikan’ny lafiny toe-karena. Tsy diso anjara koa anefa ny tontolon’ny fanatanjahan-tena sy ny sary na teny nampiomehy sy nampikakakaka ny maro, ary mazava ho azy ny kolon-tsaina ara-mozika sy hira. Raha atao bango tokana izany rehetra izany, dia maharakotra ny FIAINANA amin’ny ankapobeny.
Nisy taminareo no nilaza fa nisy TSIKERA na TSINDROM-PAINGOTRA na tsy fitovian-kevitra teny ho eny, kanefa hoy kosa izahay hoe : ny ISAVOROVOROAN-KILATOANA, ary fanairana AM-PITIAVANA fotsiny anie izany paingotra izany e, na dia sangisangy zary tenany aza :
ka raiso am-pitsikiana mba tsy ilazana hoe ; » sarobabay re ka izay voa aza tezitra » na koa hoe : » raha voan’ny sery ianao dia mandraisa mosara »
Koa ny FIRARIANA izany dia ny hitohizan’ny FIFANDRAISANTSIKA hatrany eto amin’ity tranon-kala ity bebe kokoa hatrany amin’ny manaraka rehetra.
Ary koa satria moa ny FISAORANA dia toy ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana, koa dia mamerina sy manantitra ny FISAORANA sy FIARAHABANA anareo izahay eto amin’ny 102Kara.com
1 octobre 2017 - 23 h 49 min Divers 205 vues